Broadcast-SocialMedia မော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
နယူးဇီလန် Game Show Brain Busters တွင် Lectrosonics သည်ကလေးသူငယ်စွမ်းအားကိုအသုံးပြုသည်
အသစ်သော Dalet Brio IP စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအားခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပရိုတိုကောများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စေသည်
Ultra HD ဖိုရမ်သည် UHD ၀ န်ဆောင်မှု ၁၉၀ ကျော်ကိုခြေရာခံသည်၊ NGA ကိုအလေးပေးသည်၊ လမ်းညွှန်ချက်များ v190 ကိုထုတ်ဝေသည်၊
AMC Networks International - UK သည် ၂၁ လိုင်း EMEA ကစားခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် Globecast ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
“ The Cleansing Hour” ဇာတ်ကားသည် Blackmagic ဒီဇိုင်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ချခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: အသံလွှင့်-SocialMedia
Tag Archives: ထုတ်လွှင့်-SocialMedia
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မေလ ၂၀ ရက် - အသံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်အသံဖမ်းစက်ရုံ၏မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လုပ်သူများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ အသံဒီဇိုင်းနာများနှင့်တီထွင်သူများအနေဖြင့်ရုပ်ရှင်ရုံအရည်အသွေးအသံများကိုထုတ်လုပ်ရန် AI-assisted content ဖန်တီးခြင်း tools များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ဆုရဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို၎င်း၏ဒီဇိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခမဲ့ဗားရှင်းနှင့်အတူတရားဝင်ဖြန့်ချိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Fremont, CA - ၂၀၂၀၊ မေလ ၂၀ ရက် - Blackmagic Design မှ MultiCAM Systems သည်ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေသည့် DeCLink PCIe ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကဒ်များကို၎င်းတို့၏ MultiCAM လိုင်းနှင့်အတူဗွီဒီယိုစနစ်တစ်ခုတွင်အသုံးပြုနေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ DeckLinks ကို Multialooks ဗီဒီယို SDK နှင့်တွဲ သုံး၍ MultiCAM အားဗီဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းများလွယ်ကူစွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
Podcast တည်းဖြတ်သူကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများသာမြို့၊ ပြည်နယ်အဝေးသင်လစာနှုန်းထား / နှုန်းမသတ်မှတ်ရအလုပ်အကိုင် 05/13/20 တွင်တင်ထားသည်မဟုတ်ပါ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖော်ပြချက်အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗွီဒီယိုများနှင့် podcasts များကိုအထူးပြုကြော်ငြာသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီသည်အချိန်ပိုင်း Podcast Editor ကိုရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်ပူးပေါင်း! တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပေါင်းခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော podcast အယ်ဒီတာကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။
သေနတ်သမား / အယ်ဒီတာ / လူမှုမီဒီယာ Intern
သေနတ်သမား / အယ်ဒီတာ၊ လူမှုမီဒီယာ Intern ကုမ္ပဏီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသာလျှင် City, State Los Angeles, CA အချိန်မပေးရသေးလျှင်လစာဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ နှုန်းသင့်လျော်ပါက + ကျောင်းခရက်ဒစ်သက်တမ်း ၅/၁၄/၂၀၁၀ တွင်ဖော်ပြထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မျှဝေရန်အလုပ်အကိုင်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူ! ရရှိနိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလခပေးရသည့်သေနတ်သမား / အယ်ဒီတာနှင့်လူမှုမီဒီယာ Intern များအနေဖြင့် ...
Motion Graphic Designer ကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်မြို့တော်ပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ပြည်နယ်၊ စီ။ အီး။ ကြာချိန်မပေးရလစာနှုန်းထားမသတ်မှတ်ရအလုပ်အကိုင် 05/19/20 တွင်ဖော်ပြထားသည်မဟုတ်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ် ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းမျှဝေပါအလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ (ယခုအဝေးမှ) အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဂရပ်ဖစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာဖွေခြင်း တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အထူးသဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုဂရပ်ဖစ်များပြုလုပ်သည်။ သူတို့လမ်းကိုသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရှာနေတယ်။
CGI အဆိုတော်ကုမ္ပဏီသာစာရင်းပေးသွင်းသူသာမြို့၊ ပြည်နယ်အဝေးမှကြာရှည်မလစာ / နှုန်းမပေးရအလုပ်အကိုင် 05 တွင်တင်ထားသည့်အလုပ်မရှိပါဝက်ဘ်ဆိုက်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းဝေမျှခြင်း Autodesk MAYA နှင့်အလုပ်လုပ်သော CGI အနုပညာရှင်ကိုရှာနေသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောဖုန်းများနှင့် 19D ကင်မရာတို့ကိုအသက်ဝင်စေရန်အတွက်စက္ကန့် ၃၀ ကြာသည့်ကာတွန်းဗီဒီယိုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းမော်ဒယ်များကိုဖန်တီးပြီးဖြစ်သည်။
1 ၏စာမျက်နှာ 10012345 » 102030...နောက်ဆုံး»
Casting ဒါရိုက်တာ / ထုတ်လုပ်သူ / AP